Khangela uMhlobo ... FXCC
I-Equinix Data Centre
200% Ibhonasi yeDistim
I-akhawunti ye-ECN XL - i-Zero
ikhaya / Ukunikezela ngeengxelo / Forex Offers Overview / Khangela uMhlobo
Khangela iNkqubo yoMhlobo
Siyakwamkela kwiFXCC Jonga iNkqubo yoMhlobo, eyenzelwe ukunceda abaxhasi bethu bathathe ixabiso elingakumbi kwiirhweba zabo kwaye bafumane umvuzo owongeziweyo!
Ukuba unelisekile ngamava oshishino lweFXCC, unokumema abahlobo bakho ukuba bajoyine kwaye babelane ngempumelelo.
I-Our Refer Inkqubo yoMhlobo yenzelwe ukuvuza kuphela abathengi bethu abathembekileyo ekudluliseni kwabo, kodwa nabahlobo babo abaqala ukurhweba nathi. Maye banandipha ukuzinikezela kunye nobuchule bokusebenza kwabasebenzi bethu, kunye neemeko zokurhweba.
Indlela yokuthatha inxaxheba kwiNkqubo yoMhlobo?
Naliphi na umthengi one-akhawunti yokurhweba ephilayo kunye neFXCC uvumelekile ukuzuza kule nkqubo yokudlulisa.
Ngena nje kwi-Hub Hub kwaye ugcwalise ifom efunekayo kunye neenkcukacha zomhlobo wakho. I-imeyile iya kuthunyelwa kubangani bakho abaqulethe ikhonkco lokuthunyelwa ukuze sikwazi ukubonisa ngokuzenzekelayo ukuthunyelwa kuwe.
Fumana iRewarded! Ufumana umvuzo ngamnye kumhlobo uqalise ngokungabikho kwemingcele kwinani labangane abangakwazi ukujoyina.
Yintoni eyenza ukuba sijongise iNkqubo yoMhlobo eyahlukileyo?
Siyakuvuza abahlobo bakho.
Jonga ngezantsi kwesikimu esivuzayo:
Abantu abangabamemezayo kwiFXCC, imivuzo engaphezulu ingayifumana.
Cofa apha ukufunda iMigomo nemeko.